Home Wararka DG Galmudug & Jubbaland oo laga codsaday inay dhamaystiraan Aqalka Sare
DG Galmudug & Jubbaland oo laga codsaday inay dhamaystiraan Aqalka Sare
Dowlad-goboleedyada Hirshabeelle, Koofur Galbeed, Puntland iyo Somaliland ayaa soo dhamaystiray doorashada Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya taas oo ka dhigan in dowlad-goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug ay ku dhimanyihiin doorashada 6 kursi oo mid ah 54 mudane ee uu ka koobanyahay aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Dowlad-goboleedka goboleedka Hirshabeelle ayaa noqonayaa kii 3aad ee si buuxda u dhameystira doorashada Aqalka Sare kadib maamulka Puntland iyo Koofur Galbeed. Sidoo kale doorashada Aqalka Sare ee Somaliland ayaa lagu soo geba-gebeeyey Muqdisho, toddobaadkii tegay.
Baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya oo ka 54 xubnood ayaa hada la doortay 48 xubnood oo u dhiganta ( 89%), waxaana dhiman 6 xubnood oo u dhiganta (11%). Maamulka Jubbaland waxaa ku dhiman doorashada 4 xubnood, halka Galmudug ay ku dhimanyihiin doorashada 2 xubnood oo ku biiriya aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Jubbaland ayaa noqotay dowlad-goboleedkii ugu horeeyay ee bilaawda doorashada aqalka sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ee sanadka 2021, waxaana doorashadu si rasmi ah Kismaayo uga bilaabaday 9 July 2021. Baarlamaanka Aqalka sare ee kooban 54 xubnood, waxa ayna u kala qaybsanyihiin. Jubbaland, Galmudug, Hirshabeellle iyo Koofur Galbeed ayaa leh min 8 subnood halka Somaliland iyo Puntland ay leeyihiin min 11 xubnood.